News - Aluminium guddi
1. Miisaan khafiif ah, qalafsanaan sare iyo xoog.
2. U adkaysiga cimilada wanaagsan iyo guryaha ka hortagga wax-is-xoqidda.
3. Waxaa looga baaraandegi karaa qaabab murugsan.
4. Midabbo badan oo la doorto.
5. Si fudud loo nadiifiyo loona dayactiro.
6. Ku habboon rakibidda.
7. Deegaanka u roon, 100% dib ayaa loo isticmaali karaa.
Waa maxay guddiga Aluminium?
Aluminiumka Aluminium ayaa sidoo kale loogu magac daray saxan aluminium, aluminium daahan, aluminium xirashada, iyo aluminium waji, waxaa laga sameeyay aluminium heer sare ah, waxaana lagu farsameeyaa farsamooyin kala duwan oo wax lagu farsameeyo sida goynta, laabashada, foorarsiga, alxanka, xoojinta, shiidi, ranjiyeynta iwm
Iyada oo ah xulashada ugu weyn ee dhismaha dharka, aluminium aluminium wuxuu leeyahay meel ballaadhan oo horumarineed marka la barbar dhigo qalabka dibedda sida dhoobada dhoobada, dhalooyinka, guddiga aluminium ee isku dhafan, guddiga malabka iyo marmar.
Aluminium dusha sare ee darbiga darbiga guud ahaan waa daaweyn chrome, ka dibna u isticmaal daaweynta rinjiga buufinta buufinta fluorocarbon. Aluminiumka adag ee Aluminiumku waa fluorocarbon rinjiyeysan oo la mariyey polyvinylidene fluoride la midabyo adag iyo midabbo macdan ah. Waxay leedahay caabbinta daxalka iyo u adkaysiga cimilada, roobka aashitada, buufinta milixda iyo wasakhda hawada ee kala duwan, iska caabbinta kuleylka iyo qabowga, waxay u adkeysan kartaa shucaaca xooggan ee ultraviolet, muddada-dheer si loo ilaaliyo wax aan sii idlaanin, aan jajabin oo waara.
Waxaa badanaa laga sameeyaa guddi, adkeysi, geeska aluminium iyo waxyaabo kale
Daawaha Aluminium: 1100 H24 / 3003 H24 / 5005
Oo dhumucdiisuna waxay Panel: 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm iyo 7.0mm
Cabbirka guddiga: 600 x 600mm, 600 x 1200mm, 1300 x 4000mm ama cabbirka la habeeyay
Aluminiumka aluminiumku wuxuu ku habboon yahay qurxinta derbiyada gudaha iyo dibedda, barxadda hore ee guriga, qurxinta tiirarka, buundada dadka lugaynaya, wiish qabashada, daboolka balakoonka, saqafka gaarka ah ee qaab-dhismeedka gudaha, iwm. , saldhigyo, isbitaal, opera, garoomo, jimicsi iyo dhismayaal dhaadheer.
Marka la barbardhigo aluminium aluminium ah, sifooyinka farsamooyinka ee aluminium aluminium ayaa si cad uga fiican kan isku dhafan, iyo iska caabbinta cadaadiska dabaysha, nolosha adeegga ayaa sidoo kale ka fiican aluminiumka isku dhafan. Waxaa intaa dheer, guddiga aluminium waxaa badanaa lagu farsameeyaa sheyga dhammaaday ee warshadda oo lagu rakibay goobta.
Aluminiumka aluminiumku wuxuu hadda si aad ah ugu soo kordhayaa adduunka oo dhan, waa xulashadaada caqliga leh ee dhismaha qalabka qurxinta.